Safiir si sharci darro ah uga shaqo bilaabay Muqdisho kadib markii lagu badalay safiir hore (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Safiir si sharci darro ah uga shaqo bilaabay Muqdisho kadib markii lagu badalay safiir hore (SAWIRO)
Safiirka cusub ee dalka UK usoo magacawday Soomaaliya David William Concar ayaa ku dhacay khalad diblomaasiyadeed kii ugu weynaa ebid, kadib markii uu si sharci darro ah uga shaqo bilaabay safaaradda UK ee magalaada Muqdisho, isagoo aanay laga guddoomin waraaqadaha aqoonsiga ee safiirnimo.
Safiirkaan cusub oo muddo dhowr toddobaad ah ka howlgalaya safaaradda UK ay ku leedahay xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho ayaa hore u diiday inuu waraaqihiisa aqoonsiga ah u gudbiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kadib markii lagu bedelay safiiradii hore Harriet Mathews.
Wuxuu safiirkaan durbadiiba haatan bilaabay inuu kulamo gooni gooni ah la yeesho madaxda maamul goboleedyada dalka, guddoonka labada aqal ee Baarlamaanka, saraakiisha AMISOM iyo Ururada bulshada rayidka, isagoo aan laga guddoomin waraaqihiisa aqoonsiga ee safiirnimo.
Sidoo kale, Mr. Concar ayaa sheegay in xildhibaanada ka tirsan labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya 10-kii xildhibaan midkood uu haysto dhalashada UK, wuxuuna taasi ku sheegay inay tahay mid lagu farxo.
Dhinaca kale, waxaa dhawaan la filyaa in David William Concar uu noqdo safiirkii ugu horeeya ee waraaqihiisa aqoonsiga danjirenimo u gudbiyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Farmaajo ayaa dhawaan ka dalbaday safiirada beesha caalamka ee ku sugan dalka inay ilaaliyaan madax banaanida iyo midnimada Soomaaliya islamarkaana markii ay la kulmayaan madaxda maamul goboleedyadda dalka ay dowladda dhexe kasoo amar qaataan.